Qatar oo jawaab rasmi ah ka bixisay eedeyn la xiriirta Fahad Yaasiin oo loo jeediyey - Caasimada Online
Home Warar Qatar oo jawaab rasmi ah ka bixisay eedeyn la xiriirta Fahad Yaasiin...
Qatar oo jawaab rasmi ah ka bixisay eedeyn la xiriirta Fahad Yaasiin oo loo jeediyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Qatar ayaa markii u horeysay si rasmi ah uga hadashay inay lacag Malaayiin doollar ah siiso madaxda waqtigoodu dhamaaday ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxay beenisay inay jiraan lacago ay Soomaaliya usoo mariso Agaasimaha Hay’adda Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya (NISA) Fahad Yaasiin, eedeyntaasi oo uu dhawaan u jeediyay Safiirkii hore Mareykanka ee Soomaaliya, Stephen Schwartz.
Dowladda Qatar oo qoraal rasmi ah usoo dirtay idaacada VOA-da oo wax ka weydiisay eedeynta Safiirkii hore ayaa gebi ahaanba meesha ka saartay inay si hoose dhaqaalo badan ku taageero dowladda waqtigeedu dhamaaday.
Stephen Schwarts, Safiirkii hore Mareykanka ee Soomaaliya ayaa wareysi uu dhawaan siiyey idaacada VOA-da waxa uu dowladda Qatar ku eedeyay inay lacag sharci darro ah siiso madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday, islamarkaana ay soo dhex-mariso Fahad Yaasiin oo uu sheegay inuu taas ka helay awood iyo saameyn siyaasadeed.
Qatar ayaa muddooyinkii dambe lagu eedeynayay inuu heshiis hoose kala dhaxeeyo madaxda sarre ee dowladda federaalka, hase yeeshe inta badan waxaa eedeymahaas gaashanka u daruurta dowladda Qatar oo loolan adag ku wajahaysa gobolka.